UNkulunkulu Usebenzisa Amazwi Akhe Ukumisa Isivumelwano Nomuntu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2018-09-28 15:47:41 80
(UGenesise 9:11-13) Futhi ngizomisa isivumelwano sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Futhi uNkulunkulu wathi, Lokhu kuwuphawu lwesivumelwano engisenza phakathi kwami nani nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani, izizukulwane ngezizukulwane zaphakade: Ngiyamisa uthingo lwami emafwini, futhi luyakuba uphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba.
Emuva Kokudala Zonke Izinto, Igunya LoMdali Liyafakazelwa Liphinde Libonakaliswe Futhi Ngesivumelwano Sothingo
Igunya loMdali lihlale libonakaliswa futhi lisebenza phakathi kwazo zonke izidalwa, futhi akabusi nje isimiselo sezinto zonke, kodwa futhi ubusa isintu, isidalwa esikhethekile asidala ngezandla Zakhe uqobo, futhi esinesakhiwo sokuphila esihlukile futhi esiphila ngohlobo lokuphila oluhlukile. Emuva kokwenza zonke izinto, uMdali akazange ayeke ukuveza igunya namandla Akhe; Kuye, igunya ayephethe ngalo ubukhosi phezu kwezinto zonke nesimiselo sesintu sisonke, laqala ngokusemthethweni kuphela lapho isintu sasesizelwe ngokwempela esandleni Sakhe. Wayehlose ukuphatha isintu, futhi alawule isintu, wayehlose ukusindisa isintu, wayehlose ukusizuza ngokweqiniso isintu, ukuzuza isintu esasingaphatha zonke izinto, futhi wayehlose ukuthi isintu esinjalo siphile phansi kwegunya Lakhe, futhi sazi igunya Lakhe, futhi silalele igunya Lakhe. Ngakho, uNkulunkulu waqala waveza igunya Lakhe ngokusemthethweni, phakathi kwabantu, esebenzisa amazwi Akhe, futhi waqala ukusebenzisa igunya Lakhe ukufeza amazwi Akhe. Impela, igunya likaNkulunkulu lakhonjiswa ezindaweni zonke ngalesi sikhathi sale nqubo; Ngikhethe nje izibonelo ezithile, ezaziwa kakhulu, eningakwazi ukuqonda ngazo futhi nazi ubungqayizivele bukaNkulunkulu, futhi niqonde ngegunya eliyingqayizivele likaNkulunkulu.
Kunokufana phakathi kwesiqephu esikuGenesise 9:11-13 kanye neziqephu ezingaphezulu eziphathelene nokuqoshwa kokudalwa komhlaba nguMdali, kodwa futhi kunomahluko. Yini efanayo? Ukufana kulele ekusebenziseni kukaNkulunkulu amazwi ukwenza lokho ayehlose ukukwenza, futhi umehluko ukuthi lesi siqephu iyingxoxo phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, lapho amisa khona isivumelwano nomuntu, futhi watshela umuntu lokho okwakutholakala kulesi sivumelwano. Lokhu kusetshenziswa kwegunya likaNkulunkulu kwafezwa ngesikhathi exoxa nomuntu, okungukuthi, ngaphambili kokudalwa kwesintu, amazwi kaNkulunkulu ayeyimiyalelo nokuthuma ngemilayezo, ayayikhishelwe izidalwa lezo ayehlose ukuzidala. Kodwa manje kwase kukhona umuntu ozozwa amazwi kaNkulunkulu, ngakho amazwi Akhe ayeyikho kokubili, ayeyingxoxo nomuntu kanye futhi nemiyalo nezexwayiso kumuntu, futhi ngaphezu kwalokho, aye yimiyalelo elethwe kozo zonke izinto eziphethwe yigunya Lakhe.
Isiphi isenzo sikaNkulunkulu esibhalwe kulesi siqephu? Kubhalwe ngesivumelwano uNkulunkulu asimisa nomuntu emuva kokubhubhisa Kwakhe umhlaba ngozamcolo, sitshela umuntu ukuthi uNkulunkulu wayengeke aphinde adale imbubhiso enjalo phezu komhlaba, nokuthi, ukuze afeze lokho, uNkulunkulu wadala uphawu—ingabe lwabe luyini uphawu? EmiBhalweni kuthiwa “Ngiyamisa uthingo lwami emafwini, futhi luyakuba uphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba.” Lawa amazwi asekuqaleni akhulunywa uMdali esintwini. Lapho esho la mazwi, uthingo lwavela phambi kwamehlo omuntu, lapho olulokhu lukhona kuze kube namhlanje. Wonke umuntu wake walubona uthingo olunjalo, futhi uma nilubona, niyazi ukuthi luvela kanjani? Isayensi ayikwazi ukukufakazela lokhu, noma ukuthola isisusa salo noma ukubona ukuthi lukuphi. Ingenxa yokuthi uthingo uphawu lwesivumelwano phakathi koMdali nomuntu; aludingi isisekelo sesayensi, alwenziwanga umuntu, futhi umuntu angeke akwazi ukuluguqula. Lokhu kungukuqhubeka kwegunya loMdali emuva kokuthi esekhulumile amazwi Akhe. UMdali wasebenzisa indlela Yakhe ekhethekile ukugcina isivumelwano Sakhe nomuntu nesithembiso Sakhe, ngakho ukusebenzisa Kwakhe uthingo njengophawu lwesivumelwano ayesimisile, kuyisimemezelo nomthetho wasezulwini oyohlala phakade ungaguquki, noma kumayelana noMdali noma isintu esidaliwe. Kepha, lo mthetho ongenakuguqulwa, kufanele kushiwo ukuthi ungokunye ukubonakaliswa kwangempela kwegunya loMdali, kulandela ukudala Kwakhe zonke izinto, kufanele kushiwo ukuthi, igunya namandla oMdali akunamkhawulo; Ukusebenzisa Kwakhe uthingo njengophawu ngukuqhubeka nokwelulwa kwegunya loMdali. Lokhu kwakungesinye isenzo esenziwa nguNkulunkulu esebenzisa amazwi Akhe, futhi kwabe kuwuphawu lwesivumelwano uNkulunkulu ayelumisile nomuntu esebenzisa amazwi. Watshela umuntu ngalokhu ayehlele ukukwenza, nangendlela okwakuzogcwaliseka ngayo futhi kufezeke, futhi ngaleyo ndlela udaba lwagcwaliseka njengokwamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. UNkulunkulu kuphela onamandla angaka, futhi namhlanje, iminyaka eyizinkulungwane eziningi emuva kokuthi ewakhulumile lawa mazwi, umuntu usakwazi ukubuka uthingo olwakhulunywa ngumlomo kaNkulunkulu. Ngenxa yalawo mazwi ashiwo nguNkulunkulu, le nto ilokhu imile ingaguquliwe futhi ingaguqukile. Akekho ongalususa uthingo, akekho ongaguqula imithetho yalo, futhi lukhona ngenxa yamazwi kaNkulunkulu kuphela. Lokhu kuyilo impela igunya likaNkulunkulu. “UNkulunkulu wethembekile, futhi izwi Lakhe lizofezeka, futhi loko okufezekile kuhlala kuze kube phakade.” Lawa mazwi abonakalisiwe lapha ngokusobala, futhi kuwuphawu nesici esicacile segunya namandla kaNkulunkulu. Uphawu noma isici esinje asitholakali noma asibonakali kunoma isiphi isidalwa, hhayi futhi ukuthi siyabonakala kunoma yikuphi okungadalwanga. Sitholakala kuphela kuNkulunkulu oyingqayizivele futhi sihlukanisa ubunjalo nengqikithi yoMdali kuleyo yezidalwa. Ngesikhathi esifanayo, kuwuphawu nesici esisho ukuthi, ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, ngeke kwedlulwa yinoma yikuphi okudaliwe noma okungadalwanga.
Ukumisa kukaNkulunkulu isivumelwano Sakhe nomuntu kwakuyisenzo esibaluleke kakhulu, futhi wayehlose ukusisebenzisa ukukhombisa iqiniso kumuntu nokutshela umuntu intando Yakhe, futhi ukwenza lokho, wasebenzisa indlela eyingqayizivele, wasebenzisa uphawu olukhethekile ukumisa isivumelwano nomuntu, uphawu olwabe luyisethembiso sesivumelwano ayekade esimise nomuntu. Ngakho-ke ukumiswa kwalesi sivumelwano kwabe kuwumcimbi omkhulu? Futhi wabe umkhulu kangakanani? Yilokhu kanye okukhethekile kakhulu ngesivumelwano: akusona isivumelwano esimiswe phakathi komuntu nomunye, noma iqembu kanye nelinye, noma izwe kanye nelinye, kodwa isivumelwano esimiswe phakathi koMdali nesintu sisonke, futhi sizohlala sisebenza kuze kufike usuku lapho uMdali eyoqeda zonke izinto. Ongamele lesi sivumelwano nguMdali, nozosigcina uMdali. Kafushane, ukuphelela kwesivumelwano sothingo, esamiswa nesintu sagcwaliseka futhi safezeka ngengxoxo phakathi koMdali nesintu futhi sisalokhu simile kuze kube namuhla. Yini enye izidalwa ezingayenza ngaphandle kokuthobela, nokulalela, nokukholwa, kanye nokufakazela kanye nokudumisa igunya loMdali? Ngoba akekho omunye ngaphandle kukaNkulunkulu oyingqayizivele onamandla okumisa isivumelwano esinjengalesi. Ukuvela kothingo, njalo njalo, kuyamemezela esintwini futhi kuyasibiza ukuthi siqaphele isivumelwano phakathi koMdali nesintu. Ukuvela njalo kwesivumelwano phakathi koMdali nesintu, okukhonjiswa esintwini akulona nje uthingo noma isivumelwano uqobo lwaso kodwa igunya elingaguquki loMdali. Ukuvela kothingo, njalo njalo kukhombisa izenzo ezinkulu nezimangalisayo ezenziwa uMdali ezindaweni ezifihlakele, kanti ngaleso sikhathi, isinika isithombe esisemqoka, segunya loMdali elingasoze lanyamalala futhi elingasoze laguquka. Akukhona lokhu okunye ukubonakaliswa kwenye ingxenye yegunya loMdali eliyingqayizivele ?
Okulandelayo： Indlela Nomumo Oyingqayizivele Wamazwi OMdali Kuwuphawu Lobunjalo kanye Negunya Eliyingqayizivele LoMdali
USathane selokhu onakalisa isintu izinkulungwane zeminyaka. Usedale ububi obungebalwe, ukhohlise isizukulwane ngesizukulwane, futhi wenza amacala esa…
Asibheke ku Genesise 22:17-18. Lesi ngesinye isiqephu esakhulunywa nguNkulunkulu uJehova, lapho athi ku-Abrahama, “Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi…
1) UJesu Usuthisa Izinkulungwane Eziyisihlanu (Joh 6:8-13) Omunye wabafundi bakhe, u-Andreya, umfowabo kaSimoni Petru, wathi kuye, Kukhona insizwa la…